“အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစေတဲ့ ငှက်ပျောဖူးရဲ့ အံ့မခန်း အစွမ်း” – Amara News
“အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစေတဲ့ ငှက်ပျောဖူးရဲ့ အံ့မခန်း အစွမ်း”
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်စားနေရပြီပေါ့ရှင်။
စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့်သွင်းရောင်းချကြပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည်မှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ?
(3)ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် လစဉ်ဓမ္မတာမှန်စေပါတယ်။ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်တာကိုလည်းလျှော့ကျစေပါတယ်။ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သွေးတိုးလည်းကျစေပါတယ်
Credit: Orginal Writer
“အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အကြိုးကြေးဇူးမြားစတေဲ့ ငှကျပြောဖူးရဲ့ အံ့မခနျး အစှမျး”
ကြှနျမငယျငယျတုနျးကဆို မမေကေ ငှကျပြောဖူး မကွာခဏဆိုသလို ခကျြကြှေးလရှေိ့ပါတယျ။ သိပျကိုအရသာရှိပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ အသားနဲ့တောငျမလဲနိုငျပါဘူး။ အခုတော့ အိမျနဲ့ဝေးနတောကွာပွီမို့ ငှကျပြောဖူး ကိုစားခငျြတိုငျး ဆိုငျတှမှော ဈေးကွီးပေးပွီး ဝယျစားနရေပွီပေါ့ရှငျ။
စာဖတျသူတို့ကော ငှကျပြောဖူးကို စားဖူးကွလား။ တိုငျးရငျးသားရိုးရာစားသောကျဆိုငျတှမှော ငှကျပြောဖူးဟငျးလြာကို ထညျ့သှငျးရောငျးခကြွပါတယျ။ ငှကျပြောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကနျြးမာရေးအတှကျ မြားစှာအထောကျအကူပွုပါတယျ။
ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျဖို့အတှကျ ဆေးဝါးတှကေို အထူးတလညျမှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကြှနျမတို့နစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့ အစားအစာတှဟော ကနျြးမာပြျောရှငျခွငျးရဲ့ အခွခေံအရငျးအမွဈတှပေါပဲ။ဒီတော့ ငှကျပြောဖူးစားတာ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရှေိသလဲ?
(3)ဆီးခြိုရောဂါဝဒေနာရှငျတှနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှအေတှကျ လစဉျဓမ်မတာမှနျစပေါတယျ။ကြောကျကပျရဲ့လုပျဆောငျမှုကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။ဝမျးခြုပျတာကိုလညျးလြှော့ကစြပေါတယျ။ဒါ့အပွငျ သားအိမျကိုလညျး ကွံ့ခိုငျစလေို့ သားအိမျကတြာမဖွဈနိုငျပါဘူး။သှေးတိုးလညျးကစြပေါတယျ
Post Views: 6,333
လေဖြတ်၊ လေဖြန်း၊ အကြောသေ ရောဂါများအတွက် ဆိပ်ဖူးပင်
ရယေုနျဘယျလောကျပငျဆိုးဆိုး နောကျထပျပွနျမဖွဈစတေော့တဲ့ ဆေးနညျး
ဗန်ဒါရွက် အစွမ်းထက်ပုံအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Previous Article ရယေုနျဘယျလောကျပငျဆိုးဆိုး နောကျထပျပွနျမဖွဈစတေော့တဲ့ ဆေးနညျး
Next Article “ ဖုန်းအလင်းကို အဆုံးထိတင်သုံးမိလို့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး ”